अष्ट्रियाको भियनामा नेपाली म’हिलाद्वारा आफ्नै तीन छोरा-छोरीको ह,त्या ! « गोर्खाली खबर डटकम
अष्ट्रियाको भियनामा नेपाली म’हिलाद्वारा आफ्नै तीन छोरा-छोरीको ह,त्या !
२०७७ कार्तिक ३ गते सोमवार प्रकाशित
ब्रसेल् । अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा एक नेपाली महिलाले आफ्नो तीन जना छोरा–छोरीको ह,त्या गरेकी छन। बागलुङ घर भई अष्ट्रियामा बस्दै आएकी ३१ वर्षीया भट्टराई थरकी उक्त महिलाले ८ महिने छोरा सहित ३ र ९ वर्षीया छोरीको ह,त्या गरेकी हुन् । भर्खरै प्रहरी कार्यालय पुगेर फर्किएका नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप सदस्य रविचन्द्र भट्टराईका अनुसार उक्त महिलाले आफ्नै अपार्टमेन्टमा छोरा–छोरीको ह,त्या गरेकी हुन् ।
ह,त्या गरिसकेपछि उक्त महिला आफैले विहानको ५ः२० बजे प्रहरीलाई घ’टनाबारे खबर गरेकी थिइन् । प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा ९ वर्षीया छोरी भने जीवि तै थिइन् तर, उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउँदा उनको पनि मृ,त्यु भइ सकेको थियो । उक्त महिलाले छोरा–छोरीको ह,त्या गरिसकेपछि आफै पनि ह,त्या गर्न लागेकी प्रहरीलाई ब’यान दिएकी छन् ।
बागलुङ घर भएका ३४ वर्षीय अर्याल थरका पुरुषले १० वर्ष अगाडि आफन्तले चिनेजानेको आधारमा बुटवलकी २१ वर्षीया भट्टराई थरकी उक्त युवतीलाई विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रिया ल्याएर सन् २०१० मा विहे गरेका थिए। गत अक्टोवर ३ मा श्रीमान–श्रीमती संगै भएर तीन वर्षीया छोरीको जन्मदिन समेत मनाएका बताइएको छ । यस घटनाको मुख्य कारण अझैँ पनि स्पष्ट नभएको भियना प्रहरीले जनाएको छ । यस घटनाबारे नेपाली राजदूत मणि भट्टराई सँग बुझ्न खोज्दा उनी बोल्न मानेनन् । भियनामा ५ सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । न्युज २४ नेपालबाट साभार
एक हप्तासम्म ब्याट्री टिक्ने नोकियाका दुई नयाँ फोन नेपालमा, यस्तो छ मूल्य